Wednesday September 18, 2019 - 19:24:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maamulka Sacuudiga ayaa wali dhax muquuranaya xaalad gabi dhaclayn ah 5 maalmood kadib markii uu lakulmay weeraro lagu naafeeyay kaabayaashiisa dhaqaalaha.
Dhaxal sugaha dowladda Sacuudiga ayaa ku mashquulsan xiriirnno dhanka taleefanada ah oo uu la sameynayo hoggaamiyaasha Mareykanka, Sacuudiga ayaa dadaal ugu jira sidii reergalbeedku ay jawaab celin melleteri uga bixin lahaayeen weeraradii lagu qaaday keydadka shidaalka shirkadda ARAMCO.
Max'med Bin Salaam ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Donald Trump wuxuuna ku qalqaaliyay in weerar xagga cirka ah lagu qaado saldhigyada ciidamada ilaalada kacaanka dowladda Shiicada Iiraan.
Sida ay sheegayaan xogo sir ah oo lasoo dusiyay dhaxal sugaha sacuudiga Amiir Maxamed bin salmaan ayaa usheegay Donald Trump in weerarkii ARAMCO uusan ka duweynayn weeraradii 11 September ee dhacay sanaddii 2001 balse Trump wax tacliiq ah kama bixin isbarbar dhiggaas uu sameeyay dhaxal sugaha Sacuudiga.
Dhinaca kale wasaaradda difaaca dowladda Sacuudiga ayaa soo bandhigtay haraadiga sawaariikhdii iyo diyaaradihii lagu weeraray Keydadkeeda shidaalka, Turki Almaaliki oo ah Afhayeenka wasaaradda difaaca ayaa sheegay in weerarka lagasoo qaaday xadka waqooyi ee wadanka Sacuudiga.
Wuxuu xaqiijiyay in dhanka Yemen weerarada lagasoo qaaday balse ay fuliyeen 18 diyaaradood oo nuuca Drone-ka ah iyo 7 sawaariikhda nuuca Kuruuzka loo yaqaan ee qaaradaha isaga kala goosha.
Sacuudiga ayaa khafiifiyay eedayntii uu ujeedinayay Iiraan wuxuuna sheegay in xukuumadda Tahran ay dhanka farsamada iyo hubka ka taageertay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee dagaalka kula jira taxaalufka carbeed.
Caddeymaha ka yimid dowladda Sacuudiga ayaa meesha ka saaraya tuhunnadii maalmihii lasoo dhaafay loo jeedinayay xukuumadda Iiraan oo ahaa in weerarada lagasoo qaaday dhanka wadanka Ciraaq ayna fuliyeen garabka Iiraan ee mandiqadda.